Umhla My Pet » Ngaba lwakho Online Iiprofayili Social waphulwe ndaneni?
ngokuthi KC Morgan
Uyazi na umntu kuphela obsessively uphengulula ngenxa imihla zabo zentlalo kwiziza eendaba enjini yokukhangela kwiinzame ukwemba ukungcola nguwe, kunene? Ngaba uyazi ukuba yintoni umzila yakho Internet uthi ngawe kubudlelwane bakho ezinokubakho?
Kanye bangaphi hoyi ngaba mhlawumbi khuphani nabahlobo bakho kunye nabalandeli uluhlu? Mhlawumbi ngaphezu ucinga. Omnye iziqwenga ezifikelelekayo ulwazi ngawe, kungcono xa kuziwa kwi-Internet, na abahlobo bakho. imihla enokwenzeka kufuneka ngokujonga uluhlu zakho nasekudaleni ezinye izimvo intle kakhulu.
Ukuba ujonga ngapha uluhlu abahlobo ngokukhawuleza, enye ingcaciso iya kuthathwa ngoko nangoko: ulinganiselo amadoda nabafazi kuluhlu. Abasetyhini abafumene amaqashiso abahlobo abangamadoda kunokoyikisa kwimihla ezinokwenzeka. Kwaye Baza ukwazi zonke ezi singayifundaphi, bunjani na ubudlelwane, kwaye mhlawumbi uyoyikiswa. Oku uya kubafazi abo bazingenele amadoda ku loluntu sasazo. Xa bebona kakhulu kwabasetyhini kuluhlu, akuhambi kuba nomdla balumke ngakumbi.
Yombindi Wena Zibonisa
eendaba Social yindlela elungileyo ukuba sihlale siphefumlelana owavelayo anxulumana zobuntu uyakuthanda, kodwa kwakhona bawuzalisa lwezihloko-iqhosha eshushu. Abantu abaninzi basebenzisa amaziko eendaba zentlalo ukulandela oonobangela zopolitiko nezentlalo ukuba Akukhathaliseki kubo. Abanye bade basebenzise njenge Soapbox ukuba choisir umdla kweekati. kwiimbono kunokuba kakhulu-ukubeka kwimihla ezinokwenzeka, ngubani na sivumelana ukubhobhoza yonke.
Asinto ilungileyo ukufumana neqabane uyavumelana nawe ngomba yonke enye, kwaye kusoloko kungcono ukuba nengqondo evulekileyo. Xa ndibuza iqabane kunye umdla zakho kwezopolitiko, wena kuyidibanisa madoda waza ezishenxisa phambi kwenu nokuba babe nethuba lokufumanisa esivumelana.
Babini kuni be thandana ngeveki, kwaye izakuba kakuhle. Kodwa ngaphambi kokuba kamana ngokusebenzisa uluhlu nabahlobo babo bathi onke amalungu azo entsapho abazana kunye nezicelo, ziyema zicinge. Akukho nto kufanelekile ukuba umhlobo abantwana babo, abazali kunye nabahlobo esikolweni aphakamileyo ngaphandle kokuba oko kugunyazisiwe cela imvume yokwenza oko.
Ingaba emva umva iqabane lakho okanye ngaphandle kwesivumelwano yabo, kwaye u ngumoya ukukhangela ngathi asiyiva. Nokuba uneenjongo elimsulwa ngokupheleleyo, ke izakuba khangela Balumkele ngesiquphe wena ngabahlobo bonke abahlobo babo. Umntu othandana naye uya kuziva ukuba uzama ukugcina tabs phezu kwabo, kwaye oku ezonokwandisa zonke iintlobo imiba trust.
Ezi Amafoto Ufak
Wena dieted yonke ebusika kwaye ngoku khangela emangalisayo kuloo kuqubha kraca-omtsha ... kodwa loo nto ayithethi ukuba kufuneka babelane ngayo ihlabathi. Ekholelwa uzichazela kwiifoto zenu ngokunika off bacinge engalunganga malunga uhlobo lomntu onguye. Bonisa off kakhulu yesikhumba, neqabane lakho enokwenzeka ukuba nomona. Baya angaphulukana intlonipho kuwe. Kokuba babe ngabo kwa ukubonisa iifoto zakho nabanye abantu, okanye ngokutsha apapashe kwaye wabelane ehlabathini, xa nina nathanda kuphela ukwabelana pics kunye khetha embalwa.
Wakuba wabeka okuthile kwi-Internet, nabani na kuyo, wonke umntu uya kuba izimvo ngayo. Khumbula ukuba ngaphambi kokuba ebonisa ukuba shot kuqubha.
The Cala Game
Ukuthatha unonophelo kuwe nizinikele njani wena kwiisayithi zosasazo zasekuhlaleni. Akufuni ukuba atyhile kakhulu. Loo mfanekiso Goofy kuni ukuba uyamthanda apho uya kudlule phezu kwesingqengqelo ukuze yokuvuselela iinkumbulo kakhulu kuwe, kodwa umhla ezinokubakho kunokuba iflegi enkulu ebomvu. Usenokuba soze ufumane ithuba lokuchaza ukuba ukuziphatha okunjalo kakuhle elidlulileyo.
Bonisa ubuntu bakho online, kodwa ubonise uguqulelo ecociweyo. Ufuna ukufumana iqabane okuthandayo ngokuba ngubani na ngokwenene, kwaye uya kuba amathuba amaninzi ukutyhila umaleko zakho ezininzi. Awunayo lokunyanzela ukubonisa zonke iinkalo yakho kwi-Internet.